Yaa u-qalmi kara qorshaha laba geedoodka ah ee loo qalmi karo? | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
“U-qalma laba caymis” waxaa loola jeedaa inaad u qalanto barnaamijyada caymiska caafimaadka ee Medicaid iyo Medicare labaduba. Waxaad sidoo kale maqli kartaa nooca u-qalmitaanka ee loo yaqaano “u-qalmitaanka DSNP” ama “u-qalmitaanka Medicare SNP” maadaama Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ay yihiin nooc ka mid ah Qorshaha Medicare Advantage.
Hadaba, maxay qaadataa si aad ugu qalanto labada caymis ee caafimaad? Qorshayaashaan waxaa sidoo kale loo yaqaan Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah. Haddii aad "haa" kaga jawaabi karto dhammaan su'aalaha hoose, waxay u badan tahay inaad hesho fursadaha u qalmitaanka labada qorshe ee caafimaadka. Context link
Ma u-qalantaa Medicaid ama ma heshaa kaalmo dhaqaale?
Barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Medicaid ee ka jira gobolkaaga waxaa maamula dawlad-goboleedkaaga. Sharciyadda aad ugu qalmi karto Medicaid waxay ku xiran tahay gobolkaaga. Miyaad heshaa kaalmo dhaqaale sida dakhliga sugan ee kabbista ah (SSI)? Hadduu dakhligaagu hooseeyo, waad u-qalmi kartaa Medicaid.
Si aad u ogaato inaad ka heli karto Medicaid gobolkaaga, ka hubi wakaaladda Medicaid ee gobolkaaga. Waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha mareegta ee wakaalada Medicaid ee gobolkaaga bogga “Faahfaahinta Qorshaha” ee loogu talagalay qorshe kasta oo ka mid ah qorshayaashayada caafimaad Si aad u aragto qorshayaasha caafimaad ee aan ka bixinayno aaggaaga, fadlan ka raadi qorshayaasha ku jira gobolkaaga.
Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee qaranka oo ay maarayso dawladda dhexe. Waxaa loogu talagalay dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale dadka qaarkood ee da'doodu ka yar tahay 65 jir ee qaba naafonimo gaar ah. Si aad ugu qalmato Medicare, waa inaad sidoo kale tahay muwaadin Ameerikaan ah ama deggane sharci ah oo ku noolaa Maraykanka ugu yaraan 5 sano.
Medicare Part A waa caymis isbitaal. Medicare Part A wuxuu daboolaa adeegyada laga yaabo inaad hesho bukaan-jiif ahaan inta aad isbitaalka ku jirto ama xarunta kalkaalinta ee xirfadlaha joogo. Medicare Part B waa caymis caafimaad. Medicare Part B wauxuu daboolaa adeegyada dhakhtarka iyo daryeelka kahortagga ah. Si wadajir ah, Medicare Part A iyo B ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Original Medicare. Wax badan ka ogow 4 qaybaha kala duwan ee Medicare.
Ma ku nooshahay aagga caymiska adeegga ee labada qorshe?
Nooca qorshayaasha laba geesoodka ah ee aad u-qalmi karo wuxuu ku xiran yahay halka aad ku nooshahay. Cinwaanka gurigaagu waa inuu ku yaala aagga caymiska ee qorshayaasha laba geesoodka ah si aad ugu qalmato qorshahaas caafimaad ee laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee gaarka ah. Si aad adiga u hesho qorshaha UnitedHealthcare Dual Complete®, fadlan raadi qorshayaasha ka jira gobolkaaga.
Si kooban: Yaa u-qalmi kara qorshaha caafimaadka laba geedoodka ah ee loo qalmi karo?
Sidee ayaad ugu qalmi kartaa Medicare iyo Medicaid labaduba? Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo haddii:
Aaad u-qalanto caymiska Medicaid ee ka jira gobolkaaga
Aad u-qalanto Medicare Part A iyo B (Original Medicare)
Aad ku nooshahay aagga caymiska adeegga ee labada qorshe
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.18.2022 waqtiga 02:57 GALABNIMO CDT